Nharembozha yangu haiende kupfuura logo, ndinoigadzirisa sei? - Android Pop ▷ ➡️
Sei foni yangu isingapfuuri logo?
Kana pane chimwe chikonzero iwe nharembozha haidi kupfuura logo uye zvinoramba zvakadaro, hauna kana chekushushikana nazvo nekuti nhasi tichakupa nzira yekuzvigadzirisa. Kana wakambo foni inogara pane logo kana pasikirini dema isu tinokuudza iwe kuti ungagadzirisa sei dambudziko.
Iyo Android inoshanda sisitimu ndeimwe yeanonyanyo shandiswa pasirese sezvo ichitipa akawanda maturusi uye maitiro ekugadzirisa. Asi pane dzimwe nguva izvi zvinowanzo kuve nezvikanganiso zvakakomba sezvazviri Bootloop inova kukanganisa kunoitika kune vanhu vazhinji vanoshandisa iyo Android inoshanda sisitimu.
Tichakupa tsananguro pfupi yezvinonzi Bootloop kukanganisa mu Android uye tichakupawo dzimwe sarudzo dzekuti ungagadzirisa sei dambudziko iri. Kana foni yako ikabatwa nedambudziko reBootloop.
Chii chinonzi Bootloop? uye Nei foni yangu ichigara pachiratidzo?
El Bootloop Iri idambudziko rinobata vanhu vanoshandisa nharembozha yeAroid, dambudziko iri rinowanzo kuve rakajairika kupfuura vazhinji vanotenda. Kanganiso iyi inoonekwa patinoedza kubatidza nharembozha yedu asi haina kubhadharisa zvizere uye inongogara pachiratidziro chemumba chine mucherechedzo wechiratidzo.
Izvi zvenguva isingazivikanwe zvichikonzera isu kusakwanisa kushandisa chishandiso chedu zvakajairika. Ndozvinoitika kune yako nharembozha painogara pachiratidziro chemumba
Zvino zvaunoziva kuti dambudziko nderei nefoni yako, tichapa tsananguro pfupi yezvaungaite kuti uwanezve nhare yako.
Dambudziko iri rinogona kuitika munharembozha dzemhando dzakasiyana senge Samsung, Huawei, LG, Nokia, Motorola, Xiaomi, nezvimwe. Sezvo iri dambudziko rinokanganisa iyo Android system zvakanyanya. Ini ndichakupa mhinduro iyo inogona kushanda pane akawanda mafoni maBrand uye akasiyana mamodheru.
Maitiro ekuita kuti nharembozha yangu ipfuure iyo logo?
Iyi idiki diki asi inoshanda tsananguro yekuti ungaita sei kuti foni yako ipfuure logo, kana yako nhare mbozha iine dambudziko rekuti uibudise uye anogara muTelcel logo paunobatidza pano ndiyo mhinduro.
Usati wakwanisa kukupa maitiro ekuita izvi, zvingangoita kuti iwe ucharasikirwa neese mafaera uye data rawakachengeta pane yako foni mbozha. Asi icho chinhu chatinofanira kuita kuti iwe ugone kushandisa yako nhare mbozha zvakare.
Imwe yambiro, kana nharembozha yako iine warandi, zvakanakisa kutaura nemugadziri we mobile yako kuti uone kana vachigona kukubatsira kugadzirisa dambudziko rako. Zvichida kuti kana iwe ukatora chiito ichi iwe ucharasikirwa newarandi yechigadzirwa chako.
Zvino kana tikazokutsanangurira kuti ungagone sei dzosa foni yako kana isisapfuure logo mushure mekuibatidza.
Ndinodzosera sei nharembozha yangu?
Kugadzirisa dambudziko redu isu tinopinda kugadzirisa mamiriro kubva kunharembozha yedu kuti upinze kupora unofanirwa kudzvanya bhatani remagetsi uye vhoriyamu kumusoro panguva imwe chete. Saka kudzamara iyo yekudzoreredza yakavhurwa. Mumhando dzakadai Samsung, Huawei, etc.
Mune mamwe mabhureki akaita Nokia, Motorola, pakati pevamwe, kuti ukwanise kutanga yekudzoreredza modhi nenzira yakafanana, unofanirwa kudzvanya bhatani remagetsi uye vhoriyamu pasi. Iwe chete unofanirwa kuchinja bhatani izvi hazvina kunyanya kuoma kuita pane zvinopesana zviri nyore kwazvo kuita.
Kuti uzive kana iwe ukawana yekudzoreredza modhi, mamwe mitsara muChirungu anofanirwa kuoneka pachiratidziri nechena skrini, kana zvirevo zveChirungu zvisingaonekwe, zvinonyanya kuitika kuti vanozoonekwa mumutauro weChinese kana nhare yako ichibva China.
Kunyange zvakadaro, sarudzo dzinoramba dzakangofanana nemutauro weChirungu saka haufanire kunetseka, ramba uine nhanho dzinotevera.
Kugona kusarudza sarudzo, vhoriyamu kumusoro uye pasi mabhatani anowanzo shandiswa, kubaya pane yakasarudzwa sarudzo bhatani remagetsi rinoshandiswa.
Zvino zvatinoziva mashandisiro ekudzosa maitiro isu tichaenderera mberi fomati nharembozha yedu. Kuti uite izvi unofanirwa kuenda kune sarudzo inonzi Kudzosera zvazvanga zviri kubva kufakitori. Kana sarudzo yacho isingaoneke, inowanzo daidzwa pukuta dhata / reset fekitori Paunenge wabaya pairi, iwe unotofanira kumirira yako nhare kuti ifomatire uye udzokere kune yayo fekitori nyika. Kana nharembozha yako iri mumutauro weChinese, inenge iri yechishanu sarudzo yaunofanira kudzvanya kuti ugone kudzorera nhare yako.
Ndiyo nzira yaunofanira kushandisa kuti ukwanise kupora nharembozha yako kana ikasapfuura logoKunyangwe iwe uchirasa mafaera, zvirinani pane kusakwanisa kushandisa nhare yako zvakare. Ndinovimba wakwanisa kudzoreredza yako Android mbozhanhare, kana ukasangana nedambudziko uchiita izvi unogona kutisiira mhinduro nedambudziko rako.
Manuel musi wa 25 Ndira 2020
Ndatenda, ndinogona kushandisa nharembozha yangu zvakare.
Admin muna Kukadzi 25, 2020
Shamwari yakanaka sei, yakanaka sei kuti wakakwanisa kugadzirisa dambudziko rako.
Mariano musi wa 5 Kurume 2020
Nhare yangu inogara paTelcel logo, asi ndakakwanisa kuigadzirisa, maita basa, ndinovimba vanoenderera seizvi.
Valeria musi waMay 3, 2020
Nharembozha yangu yakaramba iri mu logo ndichiyedza kuitangazve asi nedzidziso iyi unogona kuishandisa zvekare ndatenda.
Jimena musi waMay 15, 2020
Kutenda nedzidziso, ndakakwanisa kugadzirisa nharembozha yangu, kunyangwe yaive yakaoma.
Daniela musi waMay 26, 2020
Pakutanga ndanga ndisingazive kuti ndopinda sei Recovery mode, asi mushure mekuyedza kushoma ndakakwanisa kupinda nekutora nhare yangu, maita basa.
Mauricio musi waJune 20, 2020
Ko kana nharembozha yangu isisabatike, ndingaise nzira iyi padambudziko iri?
Pedro Martinez munaGunyana 6, 2020
Zvakare dzidziso padambudziko iro, unogona kuitsvaga muinjini yekutsvaga.
Ramiro musi waJune 20, 2020
Iyi dzidziso inoshanda paAlcatel brand nhare mbozha
Pedro musi waJune 20, 2020
Inoshanda pane akawanda maserura emafoni, tora bvunzo uye utiudze kuti zvakafamba sei.
Alfredo Morales muna Chikunguru 20, 2020
Ndingaite sei kuti ndipinde yekudzoreredza modhi pane ZTE
Dhinda simba uye bhatani pasi bhatani.
Martina Aranda muna Nyamavhuvhu 12, 2020
Dhata rese riri mufoni mangu richadzimwa here?
Ehe, mafaera ese ari pafoni yako anozobviswa.
Tatiana muna Gumiguru 7, 2020
Kana iwe uchida kuwana zvakawanda kubva mundima ino saka une
kushandisa marongero akadaro kuwebhusaiti yako yawakawana.
Liv pana 28 Zvita 2020
Nharembozha yangu ndeye M4Inspiration SS4453, ine bhatiri rakavakirwa, uye rinonamira paTelcel logo uye rinogara richichinja kupenya kwechidzitiro, rozotangazve uye rogara pachiratidzo zvakare. Chii chaungaite kugadzirisa izvi?
Admin pana 28 Zvita 2020
Kubva pane izvo zvaunotsanangura, bhatani remagetsi rinogona kunge rakanganisika. Kana nharembozha isisakwanise kushandiswa, zvakanakira kuimata neyakagadziriswa mamiriro.
Maitiro ekugonesa maviri bhatani rekufambisa bhawa pane OnePlus 7 uye 7 Pro inomhanya Android 10 beta
Instagram yeApple yanyangarika kubva kuGoogle Play Ungazviwana sei?
Maitiro Ekubvisa Cache pane Android Slow Smartphone?
Zvirongwa zvekutora mumhanzi